नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई रामचन्द्रले किन लगाए यस्तो आरोप ? - ramechhapkhabar.com
नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई रामचन्द्रले किन लगाए यस्तो आरोप ?
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नवनिर्वाचित सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् बीचमै अन्त्य गर्न सक्ने आशंका गरेका छन्। बुधबार बिहान फेसबुकमार्फत उनले देउवाको नाम नलिई संसदबाटै सबै निकास खोज्छु भनेर आएको सरकारले पनि संसद सुचारू गराएर देशलाई लोकतान्त्रिक गति दिने सार्थक प्रयास नगरेको दाबी गरेका छन्।
जारी १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत पहिलो चरणको मतदानबाट सभापतिको टुंगो नलागेपछि दोस्रो चरणमा देउवाले दोस्रो पटक जितेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य तेज रावलका अनुसार पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले २ हजार ७ सय ३३ (५९.२२ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका छन्। सभापतिका अर्का प्रत्यासी डा. शेखरप्रसाद कोइरालाले १ हजार ८ सय ५५ (४०.७७ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका छन्। ४ हजार ६ सय २३ मत खसेकामा ३५ वटा बदर भएको समितिले जनाएको छ।